“Qolka labiska lagam rabin isaga!” Emery oo mar kale dhaleeceeyay Ozil – Gool FM
(London) 16 Maaajo 2020. Tababarihii hore ee Arsenal, Unai Emery ayaa mar kale eedeyn dusha kaga tuurray Mesut Ozil, isagoo ku eedeeyay hab dhaqankiisa iyo ka go’naasho la’aanta xilligii ay wada shaqeynayeen, isagoo sidoo kale sheegay in safka kooxda ay diideen inuu kabtan u noqdo.
Emery ayaa laga ceyriyay shaqada Arsenal kaddib markii ay kooxdu gashay hab ciyaareedkeedii ugu liitay kaddib 1992, waxaana si ku meel gaar ah shaqada kaga baddelay Freddie Ljungberg ka hor inta aanan shaqada si toos ah loogu gacan galinin Mikel Arteta.
Ozil ayaa si dhif dhif ah ugu soo billaaban jiray kulammada kooxda Arsenal intii uu xukunka hayay Emery, xilli la xasuusto inuu kusoo billawday kaliya hal jeer 10-kii kulan ee ugu horreysay xilli ciyaareedkan.
“Wax badan ayaan la hadlay Ozil,” ayuu Emery u sheegay Guardian. Waxaana uu hadalkiisa uu ku daray “Waa inuu is xisaabiyaa, uu taxliiliyaa dhaqankiisa iyo dareenka uu kooxda u hayo.
“Waxaan isku dayay inaan caawiyo Ozil, xiraddeyda tababarennimo, ciyaartoyda tayada leh waxay ku gaaraan heerkooda ugu fiican markay ila joogaan. Had iyo jeer waxaan ahaa mid wanaagsan, waxaanna doonayay inuu ciyaaro.
Emery ayaa sidoo kale sheegay inuu damacsanaa in laacibkii hore ee Real Madrid uu si wanaagsan kaga qayb qaato is dhex galka qolka labiska.
“Kabtan ayuu noqon karay, balse ciyaartoyda qolka labiska ma aysan rabin inuu kabtan u noqdo. Ma ahayn wax aan go’aansaday, ee waa arrin ay ciyaartoyda go’aansadeen. Kabtannada waa kuwa difaaca kooxda, tababaraha iyo xiddigaha ku kooxda ah.” ayuu hadalkiisa ku daray macallinka reer Spain oo isku difaacay inuu doonayay caawinta Ozil.
Milaterigii Son Heung-min ahaa ee Tababarka ku soo qaatay Koonfurta Kuuriya oo ku soo laabtay Magaalada London